Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada » Atlantic Canada ga -emepe ndị njem US ọgwụ mgbochi
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
N'ịgbaso ọkwa mmeghe nke ókèala Canada, ógbè Atlantic Canada ga -emeghe ka ndị njem America gbara ọgwụ mgbochi ọrịa malite na August 9, 2021.
New Brunswick ga-anabata ndị njem America ndị natara usoro ọgwụ mgbochi COVID-19 nke gọọmentị Canada nabatara.
Malite na Ọgọstụ 9, ndị njem US gbara ọgwụ mgbochi ọrịa nwere ikike ịbanye Newfoundland & Labrador.
Malite na Ọgọstụ 9, ndị ọbịa America ndị tozuru oke dị ka ndị njem ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa zuru oke chọrọ ka ha tinye akwụkwọ maka ịbanye na Nova Scotia.
Fourgbè anọ nke Atlantic Canada ga -emeghe ka ndị njem Amerịka gbaa ọgwụ mgbochi ọrịa malite na August 9, 2021.
N'ịbụ nke dị n'akụkụ ugwu nke ókèala US nke Maine, Atlantic Canada bụ igwe mmadụ na-enweghị, mpaghara ala gbara mpaghara Canada anọ Brunswick, Nova Scotia, Newfoundland & Labrador, na Prince Edward Island.
Mmeghe ókèala etiti Ọgọstụ na-enye ndị njem US ohere ịnụ ụtọ oge ngwụcha oge ọkọchị na Atlantic Canada, nke na-enye ihu igwe dị mma, mmiri oke osimiri na-ekpo ọkụ, na njem dị n'èzí. Ọdịda ahụ na-anya isi akwụkwọ mara mma na ọtụtụ nri ụwa na ememme ọdịnala. Ọ dị mfe ịnweta site na ndịda ọwụwa anyanwụ, mpaghara ahụ na-enye oke osimiri na-adọrọ adọrọ, nri mmiri ọhụrụ, oghere dị n'èzí, ahụmịhe ala na mmiri, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ndị njem niile ga -eji BịaruteCAN (ngwa ma ọ bụ Portal weebụ) iji nyefee ozi njem ha. Na mgbakwunye na irube isi na ntuziaka njem njem gọọmentị Canada, mpaghara ọ bụla dị na Canada nwere usoro mmachi na ihe achọrọ iji chebe ndị bi na COVID-19. Dika usoro iwu na -adịgasị iche site na mpaghara ọ bụla, nke a bụ ihe ndị njem kwesịrị ịma maka ịbanye na mpaghara ọ bụla iji hazie njem njem Atlantic Canada ọzọ.
Ozugbo ókèala gọọmentị Canada mepere na Ọgọstụ 9, New Brunswick ga-anabata ndị njem America ndị natara usoro ọgwụ mgbochi COVID-19 nke gọọmentị Canada nabatara.
Newfoundland na Labrador
Malite na Ọgọstụ 9, ndị njem US nwere ọgwụ mgbochi zuru oke ka ha banye Newfoundland & Labrador ma achọrọ ka ha nyefee akwụkwọ njem n'ime awa 72 nke ụbọchị njem ha tụrụ anya ma soro ntuziaka ahụike ọha n'oge ọnụnọ ha. Achọghị ndị njem ọgwụ mgbochi nke ukwuu ka ha kewapụ onwe ha ma ọ bụ nwalee maka COVID-19 mgbe ha rutere n'ógbè ahụ.